Sidee loo aqoonsadaa waalid sun ah | Bezzia
Sida loo aqoonsado waalid sun ah
Maria Jose Roldan | 19/03/2021 22:39 | Carruurta wax baro
Waa dhif iyo naadir in la helo waalid garawsada inay sun ku tahay ilmahooda iyo in barbaarinta la siiyay aysan ku filneyn. Ahaanshaha waalid wanaagsan waxay kuxirantahay inta badan qiyamka ay ku darsadeen cunugaaga inta ay socoto howsha waxbarashada canuga. Aabuhu waa inuu ka caawiyaa ilmaha inuu yeesho shakhsiyad sax ah iyo dabeecad habboon.
Hadii kale, waalidku sifiican ugama wanaagsana oo waxaa loo arkaa waalid sun ah. Qodobka soo socda waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa astaamaha loo yaqaan waalidiinta sunta leh badanaa waxay leeyihiin iyo sida loo saxo si hawsha waalidnimadu u noqoto tan ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
2 Aad u dhaliil badan
4 Kali taliye
5 Waxay cadaadis saaraan daraasadaha
6 Wax taban oo aan ku faraxsanayn adduunka
Badbaadinta xad-dhaafka ahi waa mid ka mid ah astaamaha ugu cad uguna cad ee waalidka sunta leh. Ilmuhu waa inuu mas'uul ka ahaadaa qaladaadka uu sameeyo maxaa yeelay taasi waxay ka caawin doontaa inuu si tartiib tartiib ah u sameysto shakhsiyaddiisa. Badbaadinta xad dhaafka ah ee waalidiinta uma wanaagsana horumarka wanaagsan ee ilmaha.
Aad u dhaliil badan
Waxtar ma leh in la canaanto oo la dhaleeceeyo carruurta waqti kasta. Tan, kalsoonida iyo kalsoonida carruurta ayaa si tartiib tartiib ah loo wiiqay. Fikrad ahaan, ugu hambalyee guusha ay gaareen iyo yoolalka ay hiigsanayaan. Dhaleeceynta waalidiinta ayaa carruurta uga dhigeysa inay difaac ku jiraan waqti kasta waxayna dareemaan inaan waxtar lahayn wax kasta oo ay sameynayaan.
Waalidiinta sumeysan badanaa caruurtooda ayey daneysteyaal u yihiin. Muhiimad siin maayaan baahiyaha kala duwan ee carruurtu qabaan oo kaliya naftooda ka fikiraan. Is-jeclaantu waxay u egtahay inay si xun u saamayso xaalada shucuureed ee ilmaha waxayna sababi kartaa heerar sare oo walwal iyo niyad jab.
Awoodda xad-dhaafka ahi waa mid ka mid ah astaamaha ugu cad cad ee waalidka sunta leh. Iyagu ma ahan kuwo dabacsanaan kara dabeecad kasta oo carruurtooda ah waxayna ku soo rogaan awooddooda mar walba, taas oo u keenta dareenka dambiga carruurta. Waqti ka dib carruurtan waxay noqdaan dad waaweyn oo leh dhibaatooyin shucuur badan taasi oo si taban u saamaysa nolol maalmeedkaaga.
Waxay cadaadis saaraan daraasadaha
Kuma qasbi kartid cunug inuu barto wax uusan rabin. Waalidiin badan ayaa carruurtooda ku cadaadiya inay doortaan xirfad gaar ah iyaga oo aan tixgelin siin waxa ay dhab ahaan doonayaan.
Wax taban oo aan ku faraxsanayn adduunka
Waalidiinta sumeysan kuma faraxsana markasta oo kuma qanacsana nolosha ay hayaan. Dayacnimadan iyo rajo xumadan ayaa carruurtu ku qaabilaan dhammaan waxyaalaha xunxun ee ay ku jirto. Waqti ka dib waxay noqdaan carruur murugo leh oo aan faraxsanayn oo aan waxba ku qanacsanayn.
Ugu dambeyntiina, sunta waalidka waxaa qaata carruurta, wax run ah marka aad gaarto heerka qaangaarka. Waalidiintu waa inay koriyaan carruurtooda iyagoo tixgelinaya qiyam taxane ah sida ixtiraam ama jacayl si loo hubiyo inay yihiin dad mustaqbalka fog. Waxaa muhiim ah in carruurtu ay awoodaan inay si buuxda u kobcaan oo aysan ku xadidin si xadgudub ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Carruurta wax baro » Sida loo aqoonsado waalid sun ah
Ku kori balakoonkaaga, abuur beer magaalo
Muhiim u ah abuurista qolka dharka lagu dhaqdo ee guriga